Isivumelwano: I-ZTE iya kusebenza e-United States phantsi kweemeko ezahlukeneyo | I-Androidsis
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, sikwazise malunga nokuphela kweengxaki ze-ZTE kunye neSebe lezoRhwebo laseMelika. Ewe, oku kusemthethweni ngakumbi kunangaphambili Ifemu ibhengeze ngokusesikweni ukususwa kwesibhengezo apho iZTE yayingavumelekanga ukuba yenze ushishino neenkampani zaseMelika. Oku ngoku kuyakuvumela inkampani yaseTshayina, engomnye wabenzi bezixhobo zonxibelelwano eziphambili kule ndawo, ukuba iphinde iqhubeke nemisebenzi yayo ephambili yorhwebo kweli lizwe.
Ngexesha le nto yayisele yenzeka kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyoNamhlanje, kunanini na ngaphambili, zonke iimeko zicacile. Khumbula ukuba ingxaki iqale emva kokuba inkampani yophule isivumelwano ekufikelelwe kuso emva kokuvuma ityala lokuthunyelwa ngokungekho mthethweni kwempahla kunye netekhnoloji yase-US e-Iran, nto leyo ethetha ukophulwa kwezohlwayo ezibekwe yi-United States.
Njengenxalenye yesivumelwano, inkampani ifake i-400 yezigidi zeedola kwiakhawunti yokungena. Isivumelwano sokungena siyinxalenye yesivumelwano se-1.400 yezigidi zeerandi ekufikelelwe kuso liSebe lezoRhwebo lesizwe kwinyanga ephelileyo ukubuyisela ukufikelela kubanikezeli base-US abaneefowuni ezixhomekeke kwizinto zabo.
Isivumelwano esitsha sikwabandakanya isohlwayo se- $ 1.000 yezigidigidi. ukuba i-ZTE ihlawule uNondyebo wase-US kwinyanga ephelileyo kunye ne-400 yezigidi zeedola kwiakhawunti yokuhamba egadwe yi-United States. Ngokukodwa, urhulumente angalithatha inani le-akhawunti ayise kwi-escrow ukuba i-ZTE yaphula isivumelwano sangoku. Yintoni egqithisile, Inkampani yaseTshayina kwafuneka itshintshe ibhodi kunye nolawulo lwayo ngaphakathi kweentsuku ezingama-30. Kuya kufuneka uqeshe umphathi wangaphandle wokuthobela okhethwe liSebe lezoRhwebo.
Ekugqibeleni, Kwavunyelwana ngokuvumela urhulumente wase-US ukuba atyelele amaziko enkampani ngaphandle kwezithintelo zokuqinisekisa ukuba izinto zase-US zisetyenziswa njengoko ibifunwa yinkampani. Ukongeza, kufuneka upapashe iinkcukacha zezinto ze-US kwiimveliso zakho kwiwebhusayithi yakho ngesiTshayina nangesiNgesi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Isivumelwano: I-ZTE iya kusebenza e-United States phantsi kweemeko ezahlukeneyo
Yoyisa indawo ngoKoyiso lukaKaraz: I-RPG, isitayile esibonakalayo se-retro kunye nentwana ye-arcade